Xasan Daahir Aweys oo Cadaado la keenay, kulanna la leh madaxda Ximin iyo Xeeb – SBC
Xasan Daahir Aweys oo Cadaado la keenay, kulanna la leh madaxda Ximin iyo Xeeb
Sida wararku ku soo baxyaaan Magaalada Cadaado xarunta Maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb waxaa maanta la gaarsiiyay Shaakh Xasan Daahir Aweys iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin ciidan uu watay kuwaas oo lagu qabtay deegaano ka mid ah Maamulkaas.
Madaxweynaha Maamulkaasi Ximin iyo xeeb iyo ciidan uu wato ayaa la shaaciyay in ay gudaha u soo geliyeen Sheekha iyo ciidankiisa magaalada Cadaado iyadoo sida la dareemayo aan loola dhaqmin sida qof maxbuus ah balse soo dhaweyn loogu sameeyay deegaankaas.
Kulan ayaa la sheegay in ay ku yeesheen xubnahan iyo madaxda maamulka Ximin iyo xeeb kaas oo aan la shaacinin waxyaabaha ay uga hadleen maadaama saxaafadu banaanjoog ka aheyd.
Habeen nimadii xalay ayay ahayd markii la shaaciyay in la qabtay Sheekh Xasan Daahir iyo ciidan uu wato, waxaana deegaano ka mid ah goboladaas ugu tagay ciidankale oo uu horkacayay madaxweynaha Maamulka Ximin iyo xeeb Mr Baarleex kana soo kaxeeyay halkaasi.
Xasan Daahir Aweys mudooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa gobolka Shabeelaha hoose isagoo qeyb ka ahaa saraakiisha waaweyn ee xarakada Alshabaab, waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay soo baxayay khilaafaad u dhexeeya saraakiisha sar sare ee uu ka midka ah ahaa ee xarakada Alshabaab kaa soo la filayo in uu saameyn ku yeeshay imaadintiika gobolada dhexe.
SBC International Cadaado.